Ajụjụ - Ek Lighting Co., Ltd
Ikanam ọkụ ihu bọlbụ
canbus ada ìhè
SMD duru bọlbụ
Cree ada ìhè
Zoro xenon arọ
zoro akakabarede kit
Anyị nwere dị iche iche ngwaahịa (elu-ọgwụgwụ ngwaahịa, ufọt ufọt ọgwụgwụ ngwaahịa na-eri-oru oma ngwaahịa) maka dị iche iche ahịa, biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na ngwaahịa.
Ee, anyị na-achọ mba nile iwu ka nwere na-aga n'ihu kacha nta iji ibu.
Ee, anyị nwere ike na-emepe emepe otu. The ngwaahịa na mbukota nwere ike dị ka gị arịrịọ, na-ike laser gị logo na ngwaahịa.
Na-emekarị, anyị nwere ụfọdụ ihe na ngwaahịa, nnyefe oge (bụghị tinyere ezumike) na-emekarị 2-3 na-arụ ọrụ ụbọchị site DHL / gbasie / TNT / EMS. Ọ bụrụ na gị na iji ihe karịrị 100 tent, ọ na-ewe 7-10 ụbọchị iji kwadebe, mgbe ka qty bụ ihe karịrị 1,000 tent, ọ na-ewe 10-15 ụbọchị rụchaa mmepụta, n'ihi na ihe qty, PLS chọpụta na anyị ahịa maka kpọmkwem
Anyị akwụkwọ ikike niile anyị ngwaahịa. Anyị nkwa bụ gị afọ ojuju na anyị na. Ọ bụrụ na e ọ bụla mma nsogbu, biko eziga anyị na foto ma ọ bụ vidiyo, mgbe ahụ anyị ga-enyocha ihe mere na zere nke a nke na-eme n'ọdịnihu, ga-emekwa ka a ọhụrụ dochie anya n'ihi na ị na gị ọzọ iji.
Ee, anyị na-eji elu àgwà mbupụ nkwakọ.
Okwu: Dehuigangwang Industrial Park, Wanggang Gongye 3rd Rd, Baiyun district, Guangzhou
Ekwentị: + 86-020-87486122
© Copyright - 2010-2018: EKLIGHT niile echekwabara.
EKLIGHT bụ ọkachamara emeputa nke Ikanam ọkụ ihu bọlbụ, zoro xenon kit, akpaaka mere, n'ehihie na-agba ọsọ ìhè, ada welara.